सर्वश्रेष्ठ क्यारिबियन स्टड वास्तविक पैसा क्यासिनो अनलाइन - UK 2021 ✅
Home » क्यासिनो खेलहरू » क्यारिबियन स्टड
जब तपाईं वास्तविक पैसाको साथ क्यारिबियन स्टड खेल्नुहुन्छ
क्यारिबियन स्टड भनेको के हो?
क्यारिबियन स्टडको आधारभूत नियमहरू
क्यारिबियन स्टडको आधारभूत रणनीति
क्यारिबियन स्टडको इतिहास
क्यारिबियन स्टड खेल्नुहोस्
वास्तविक पैसाको साथ क्यारिबियन स्टड खेल्नु जोखिमपूर्ण प्रस्ताव हुनुपर्दैन। केही साधारण नियमहरू पालना गर्ने खेलाडीहरूले रमाइलो र लाभदायक अनुभव पाउनेछन्। रक्सीको साथ कहिल्यै जुवा मिसिन नगर्नुहोस्। खेल पछि आफ्नो पेय राख्ने खेलाडीहरू हातमा कुरा मा केन्द्रित रहन को लागी सक्षम हुनेछ।
खेलाडीहरू जो आफैंले एक कडा बजेट सेट गर्छन् कि उनीहरूले गुमाउन सक्छन् एक धेरै बढी सुखद र कम जोखिमपूर्ण अनुभव हुनेछ। अन्तमा, खेलाडीहरू जसले अग्रिम लक्ष्य राख्छन् कि उनीहरूले पैसा कमाउनेछन् उनीहरू सफलताको साथ फ्ल्याश छोड्नेछन् र यसको मजा लिन सक्षम हुनेछन्।
स्वीकार्य, क्यारेबियन स्टड पोकर एक रमाइलो खेल हो जुन मानिसहरूलाई धेरैको लागि फर्केर आउँछ। यो सीधा नियम र प्रभावशाली बाधा द्वारा विशेषता हो। अन्य क्यासिनो खेलहरूको विपरीत, तपाईंलाई सुरु गर्न धेरै धेरै अनुभवको आवश्यक पर्दैन। र यो राम्रो हुन्छ; तपाईं अब प्रत्यक्ष घर क्यारेबियन स्टड खेल्न सक्नुहुन्छ!
त्यहाँ कुनै श’s्का छैन कि केवल एक मानव क्रउपियरले एक नि: शुल्क र निष्पक्ष क्यारिबियन स्टड खेल प्रदान गर्न सक्छ। बाहिरको साथ, यो संस्करण ईट्टा र मोटर क्यासिनोमा उपलब्ध सबैको साथ आउँदछ। एक प्रत्यक्ष डीलर, कार्डहरूको वास्तविक डेक, र, अवश्य पनि, लाइभ सत्रको आयनिक पृष्ठभूमि शोर।
शुरुवातकर्ताहरूको लागि, प्रत्येकले खेलमा भर्चुअल सीट सुरक्षित गर्न बराबर ante बेट्स राख्नु पर्छ। त्यसैले तपाईंको बैंकरोल लोड गर्नुहोस् र यसमा “स्थान शर्त” को साथ कुनै चीज थिच्नुहोस्। त्यस पछि, डिलरले कार्डमा बदल्छ र सबैजनालाई हातमा लिने पाँच कार्डहरू राम्रो कारणका लागि।
यस विन्दुमा, तपाईं केवल एउटा डिलरको कार्ड देख्न सक्नुहुनेछ जबकि अन्यहरू तल झेलिएका छन्। सबैलाई कल गर्न वा पट्टि फिट गर्न को लागी एक मौका हुन्छ। रेकर्डको लागि, फोल्डिंगको अर्थ तपाईंको अfe्ग्रेजीलाई जबरजस्ती गर्नु भनेको जब यो माथि माथि अतिरिक्त शर्त राख्नु हो। उच्च हात जीत र पूर्ण भुक्तान गरिएको छ।
यहाँ केहि आधारभूत रणनीतिहरू छन्:
जोडी जहिले बढाउनुहोस् – तह जोडी (मानको परवाह नगरी), पश्चातापमा परिणाम दिन सक्छ
कहिल्यै कमजोर हात उठाउनुहोस् – Ace, किंग, रोयल फ्लश, स्ट्रेट फ्लश, चार प्रकारको, पूर्ण घर, तीन प्रकारको, दुई जोडी वा उच्च कार्ड बाहेक
यदि तपाईंलाई पहिले नै थाहा छ भने, यहाँ अधिक छ:
सधैं बढाउनुहोस् यदि डिलरको कार्ड रानीको माध्यमबाट २ छ र तपाईंको एकसँग मेल खान्छ
डिलरको कार्ड Ace वा किंग हो भने तपाईं उठाउन को लागी अप्ट र तपाईं एक रानी वा ज्याक छ
बढाउनुहोस् यदि डिलरको कार्ड तपाईंको चौथो उच्चतम कार्ड भन्दा कम छ
यस खेलको मूल एक अत्यधिक बहसयोग्य मुद्दा हो। सयौं व्यक्तिहरूले खेललाई साघुँदो बनाएको दाबी गर्छन्, तर एउटा कुरा भने निश्चित छ: यो ब्यावसायिक रूपमा पहिलो पटक अरुबा, क्यारिबियनको टापुमा खेलेको थियो। यहाँ, जहाजहरूमा र होटलहरूमा यात्रा गर्ने मानिसहरूले यसको बृद्धि गर्न योगदान पुर्‍याए।
यी सबै चीजहरू १ 1980 s० को दशकमा भयो तर यो १ 1990 1990 ० को दशकसम्म थिएन जब खेलले अमेरिका र युरोपमा बाँकी विश्वको लागि आफ्नो बाटो बनायो। यसको मनमोहक प्रकृतिको कारण, यसले संसारलाई आँधीबेहरीले लिन्छ र यो जुवा दृश्यमा एक लोकप्रिय प्रख्यात बन्यो।
यदि तपाईं पोकर भिन्नताहरूको लागि एक नरम स्थान छ, क्यारेबियन स्टड तपाईं आफ्नो जुवा अनुभव मसला गर्न को लागी के हुन सक्छ। यसका नियमहरू दुबै अनलाइन र अफलाइन रहिरहन्छन्। तर सधैं जत्तिकै, डटेड रेखामा हस्ताक्षर गर्नु अघि समीक्षाको लागि तपाईंको मनपर्ने खोजी ईन्जिनलाई सोध्नुहोस्।
यदि तपाईं खेलमा पूर्ण रूपमा नयाँ हुनुहुन्छ भने कुनै जम्मा बोनस क्यासिनोको लागि खोजी गर्नुहोस्। ती आधारभूत नियम बुझ्न र नयाँ रणनीतिका परीक्षण गर्न मद्दतको लागि जोखिम-मुक्त मौका प्रदान गर्दछ। खैर, यो धेरै धेरै तपाईंले क्यारेबियन स्टडको साथ सुरू गर्नु अघि जान्नु आवश्यक चीज हो। खुशीको खेल!